Kuyathandeka kwaye kube lula entliziyweni yeMartinsville
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguAaron
Ukuba ujonge i-b&b enkulu entliziyweni yeMartinsville ufikile kwindawo elungileyo! Ifakwe kwidolophu entle yaseMartinsville, sibekwe kwindawo efanelekileyo kuhambo lweshishini, sithatha ithuba lemisebenzi emininzi yolonwabo yesixeko, kwaye sonwabela i-VA entle yaseMazantsi! Eli gumbi linegumbi lokuhlambela labucala, i-keyed entry, kunye ne-tv ehlakaniphile eneNetflix, i-HBO, i-Hulu, kunye nokunye!
Siyacela ukuba zonke iindwendwe zihloniphe ikhaya lethu nakwabanye. Le yindawo enengxolo ephantsi, ilungele abahambi abaqeqeshiweyo kunye nabani na okhangela indawo epholileyo, ephumlayo yokuhlala. Olu ayilokhetho lulungileyo ukuba ib&b yakho ikwayindawo yakho yetheko!
I-Uptown Martinsville iyamangalisa! Sihlala sisebenzisa indawo yethu emangalisayo ukuhamba siye kwenye yeendawo esizithandayo zekofu kunye nokutya okumnandi: Imihla ngemihla. I-Uptown ikwaqhayisa ngokuthenga okukhethekileyo kunye namathuba amnandi, kubandakanya ukutya okumnandi, kunye ne-arcade emangalisayo!
I'm the CIO of a marketing agency headquartered in Denver and own a historic estate turned b&b in the beautiful city of Martinsville, VA.
Ilungu leqela lethu liyafumaneka ngetekisi okanye ngefowuni 24/7.